သင်၏စီးပွားရေးအတွက် Chatbot ကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်နည်း» Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2018 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 4, 2018 Paul Chaney
Chatbotsအတုဥာဏ် သုံး၍ လူ့စကားပြောဆိုမှုကိုတုပသည့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များသည်လူတို့နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည်။ chat app မ်ားကို browsers အသစ်များနှင့် chatbots များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
Siri, Alexa, Google Now နှင့် Cortana တို့သည် chatbots နမူနာများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Facebook က Messenger ကိုဖွင့်လိုက်ပြီ။ App ကသာမက bot ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကို developer တွေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
Chatbots သည်အဆုံးစွန်သော virtual assistant အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းလမ်းညွှန်များရရှိခြင်း၊ သင်၏စမတ်အိမ်ရှိအပူထိန်းကိရိယာကိုဖွင့်ခြင်း၊ သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများအထိကစားခြင်းများကိုပြီးမြောက်စေရန်ကူညီသည်။ တစ်ရက်သူတို့ကမင်းရဲ့ကြောင်ကိုတောင်ကျွေးမွေးနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူသိတာလဲ Heck!
chatbots များသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ (၁၉၆၆ မှအစောဆုံးရက်စွဲများ) ဖြစ်သော်လည်းကုမ္ပဏီများသည်မကြာသေးမီကစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်းတို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုနေကြသည် စားသုံးသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ chatbots ကုန်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း၊ ရောင်းအားချောမွေ့ခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြခြင်း။ အချို့သည်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု matrix ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်စတင်ထည့်သွင်းလာသည်။
ယခုအချိန်တွင်ရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ သတင်း bot များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္otsာရေးဆိုင်ရာ bot များ၊ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ စီးနင်းလာသည့် bot များ၊ အသက်ကယ်စက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ bot bot များပင်ရှိနေသည်။ ။
A လေ့လာချက်Opus သုတေသနနှင့် Nuance ဆက်သွယ်ရေးမှပြုလုပ်သောစားသုံးသူ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေခြင်းအစားသတင်းအချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေရန် virtual assistants များနှင့်စကားပြောဆိုလိုကြသည်။
စီရင်ချက်မှာ - လူများသည် chatbots များကိုတူးကြသည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက် chatbot ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။
သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်းရှုပ်ထွေးသည်တော့မဟုတ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအရင်းအမြစ်အချို့ကို အသုံးပြု၍ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအခြေခံ bot တစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
Botsify - Botsify သည် Facebook Messenger chatbot တစ်ခုကိုမည်သည့်ကုဒ်မျှမပါဘဲအခမဲ့တည်ဆောက်နိုင်သည်။ သင်၏ bot ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်က Chatfuel ကိုလိုအပ်သည့်အချိန်တွင် Botsify's ကိစ္စတွင်ငါးမိနစ်သာနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းတွင်မက်ဆေ့ခ်ျစီစဉ်ခြင်းနှင့် analytics။ ၎င်းသည်အကန့်အသတ်မရှိစာများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်သည်အခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါစျေးနှုန်းအစီအစဉ်များစတင်သည်။
Chatfuel - စကားဝှက်မပါပဲ chatbot တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ ဒါက Chatfuel ကသင့်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရ ၇ မိနစ်အတွင်းသင် bot တစ်ခုကိုစတင်နိုင်သည်။ Facebook သည် Messenger အတွက် chatbots များကိုကုမ္ပဏီကအထူးပြုသည်။ ပြီးတော့ Chatfuel ရဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အဲဒါကိုသုံးဖို့ကုန်ကျစရာမလိုပါဘူး။
ပြောင်းပြန် - ဆက်သွယ်မှုသည်မည်သည့်စာတိုပေးပို့ချက်သို့မဟုတ်အသံချန်နယ်တွင်မဆိုအလိုအလျောက်အတွေ့အကြုံများဖန်တီးရန်အတွက်စကားပြောဆိုနိုင်သည့်ထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
ပျံ့ - သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် Drift ဖြင့်စကားပြောဆိုမှုသည်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံစံများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များအပေါ်မှီခိုရသောရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းပလက်ဖောင်းများအစား Drift သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအကောင်းဆုံးဆက်သွယ်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ LeadBot သည်သင်၏ site visitors ည့်သည်များကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသည်၊ မည်သည့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုသူတို့နှင့်ပြောဆိုသင့်သည်ကိုဖော်ပြပြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုစာရင်းပြုစုသည်။ ပုံစံမရှိပါ။
gupshup - စကားပြောဆိုမှုအတွေ့အကြုံများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်စမတ်စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်း
ManyChat ManyChat သည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းများအတွက် Facebook Messenger bot ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ လွယ်ကူပါတယ်။
Mobilemonkey - Facebook Messenger အတွက် Chatbot ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတည်ဆောက်ရန်၊ MobileMonkey chatbots သည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆိုဖြေဆိုရန်လျင်မြန်စွာသင်ယူသည်။ သင်၏ Monkey bot ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဖြေခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
ပလက်ဖောင်းကိုသုံးပြီးသင်ကိုယ်တိုင် bot တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ Chatbots မဂ္ဂဇင်း ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင်သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုသက်သေပြသည့်သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်များရှိပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်ဘော့များတီထွင်ရန်မှာသဘာဝဘာသာစကား၊ အပြောင်းအလဲ၊ အတုနှင့်ဉာဏ်ရည်တုကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည် -
အမေဇုံ Lex - Amazon Lex သည်အသံနှင့်စာသားဖြင့်မည်သည့် application ကိုမဆို အသုံးပြု၍ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှု interface များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ Amazon Lex သည်အဆင့်မြင့်သောနက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့်အလိုအလျောက်မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှု (ASR) ကိုစာဖြင့်ပြောင်းခြင်းနှင့်စာသားသို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ စာသား၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ interaction က။
Azure Bot မူဘောင် - ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ အက်ပ်၊ Cortana၊ Microsoft Teams၊ Skype, Slack, Facebook Messenger နှင့်အခြားအရာများပေါ်တွင်သင်၏သုံးစွဲသူများနှင့်သဘာဝကျကျအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အသိဉာဏ်ရှိသောစက်ရုပ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသော bot တည်ဆောက်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင်မြန်ဆန်စွာစတင်ပါ။ အားလုံးသည်သင်အသုံးပြုသောအရာများကိုသာပေးဆပ်နေစဉ်။
Chatbase - bot အများစုသည်လေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်ပြီး Chatbase ကိုဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အထူးတည်ဆောက်ထားသည်။ ပြproblemsနာများကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးစက်သင်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုချက်များကိုရယူပါ။
Dialogflow - AI မှစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်အသံနှင့်စာသားအခြေပြုစကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမျက်နှာပြင်များတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများအားသင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းသစ်များပေးပါ။ Google Assistant၊ Amazon Alexa၊ Facebook Messenger နှင့်အခြားလူကြိုက်များသော platform နှင့် devices များမှအသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ Dialogflow ကိုဂူဂဲလ်ကထောက်ပံ့သည်။ Google အခြေခံအဆောက်အအုံတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Facebook Messenger ကိုပလက်ဖောင်း Messenger for Bot သည်လူကြီးမင်းတို့ကုမ္ပဏီနှင့်စိတ်ကူးမည်မျှကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ လူကြီးမင်းမိုဘိုင်းဖုန်းမှလူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကရာသီဥတုအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဝေမျှရန်၊ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ကြိုတင်မှာကြားမှုများအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကဝယ်ယူမှုမှလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုပေးပို့ရန်အက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုထိရောက်သော၊ ပို၍ တက်ကြွသော၊ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင်တို့၏ bot များသည် bot များကလုပ်နိုင်သည် လူနှင့်အတူ။
IBM က Watson - IBM Cloud ရှိ Watson သည်သင့်အားသင်၏အပလီကေးရှင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး AI ကိုပေါင်းစပ်ရန်နှင့်အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစိတ်ချရသော Cloud တွင်သိုလှောင်ရန်၊ လေ့ကျင့်ရန်နှင့်စီမံရန်ခွင့်ပြုသည်။
Luis - အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ bot များနှင့် IoT ကိရိယာများသို့သဘာဝဘာသာစကားကိုတည်ဆောက်ရန်စက်သင်ယူမှုအခြေပြု ၀ န်ဆောင်မှု။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်၊
ပန်ဒိုရာ - အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ geek ကိုစတင်ပြီး coding အနည်းငယ်လိုအပ်သော chatbot ကိုတည်ဆောက်လိုပါက Pandorabots 'Playground သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Artificial Intelligence Markup Language ကိုကိုယ်စားပြုသော AIML ဟုခေါ်သော scripting language ကိုအသုံးပြုသောအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလွယ်ကူစွာဟန်ဆောင်။ မရသော်လည်းဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်စတင်ရန် AIML မူဘောင်ကို အသုံးပြု၍ တစ်ဆင့်ချင်းသင်ခန်းစာပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ chatbots တည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏“ လုပ်ဆောင်ရန်” စာရင်းတွင်မပါလျှင် Pandorabots သည်ဖြစ်လိမ့်မည် သင့်အဘို့တည်ဆောက်လော့။ စျေးနှုန်းအတွက်ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါ။
ထိရောက်သော chatbot အသုံးပြုမှု၏သော့မှာသင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုကမဆောက်ရဘူး။ သင်၏ဖောက်သည်များကိုအကျိုးပြုနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုစာရင်းပြုစုပါ။ သင်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါက chatbot သည်အသုံး ၀ င်သောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သင့်အတွက်သင့်တော်သောအရာကိုရှာဖွေရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရင်းအမြစ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
Tags: aiAmazon lexဉာဏ်ရည်တုazure bot မူဘောင်botsifychat botchat bot bot မဂ္ဂဇင်းစကားဝှက်chatbotsစီးပွားရေးအတွက် chatbotsစကားမစပ်စကားပြောCortanaဖဆပလပျံ့facebook messenger ကိုFacebook Messenger ကိုပလက်ဖောင်းgoogle bot များgupshupဘယ္လိုibm Watson ဟာဘာသာစကားနားလည်မှုLuisစက်သင်ယူမှုဟားဟားမိုက်ခရိုဆော့ luisမိုက်ကရိုဆော့ဖအသင်းများmobilemonkeyသဘာဝအ langage အပြောင်းအလဲနဲ့nlpပန်ဒိုရာskype ကပျင်းရိ
သြဂုတ် 23, 2019 မှာ 2: 23 AM
ကောင်းသောအလုပ် Paul! အမှန်စင်စစ် chatbots များသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံသစ်ကိုအဆင့်သစ်သို့ယူဆောင်ရန်မိတ်ဆက်ပေးသောလျှို့ဝှက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်နက်သစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ chatbots နှင့် AI အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်သည်ဤ chatbots နှင့်သူတို့၏အင်္ဂါရပ်များကကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အံ့အားသင့်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ငါမကြာသေးမီကကွဲပြားခြားနားသော chatbots အမျိုးအစားများကိုဖော်ပြရန်နှင့်သူတို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဘယ်လိုအလားတူဘလော့ဂ်များကိုသွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒီမှာလင့်ခ်တွေပါ။ (https://www.navedas.com/the-chatbot-marketings-new-secret-weapon/ နှင့် https://mobilemonkey.com/blog/best-chatbots-for-business/)